Jilayaasha Ciyaarta Thrones ayaa ku sagootiyay taxanaha Instagram - Dhaqanka Pop
Jilayaasha Ciyaarta Thrones ayaa ku sagootiyay taxanaha Instagram
Iyadoo qaybtii ugu dambaysay ee Ciyaarta Carshiga Si dhaqso leh ayey u soo dhawaanayaan, jilayaashii sideedii xilli ee la soo dhaafey ee ka soo baxayay adduunka Westeros way macsalaameyn karaan iyagoon kicin qaylo dhaan qasa. Iyada oo bandhiggu u dhammaanayo qof walba, jilayaasha ka dambeeya Daenerys Targaryen, Jon Snow, Samwell Tarly iyo Sansa Stark ayaa dhammaantood waqti qaadanaya si ay u sagootiyaan dareenka dhaqanka pop -ka.
John Bradley, oo u ciyaara Sam, ayaa la wadaagay jadwalkiisa toddobaadkii ugu horreeyay Carshiyo .
'Halkaan waxaa ku taxan tababarkii aan markii ugu horreysay la kulmay Kit, iyo markii ugu horreysay ee aan xirto dharkii i arkay illaa 8 xilli. Waan ku faraxsanahay inaan xajiyey tan, 'ayuu qoray. 'Waxaan la kulmay dad aad u badan toddobaadkaas kuwaas oo macno weyn ii sameeyay. Waqtigaas ma garan karno safarka aroosku wada socdo. Uma beddeli lahaa waayo -aragnimadaas, ama dadkaas, adduunka.
Kit Harington wuxuu ahaa mid aad u kooban.
Marwada dhawaan la guursaday ee Winterfell, Sophie Turner, waxay ku bilaabatay sagootin iyada oo lagu maamuusayo adkeysiga dabeecadeeda.
'Sansa, Waad ku mahadsan tahay inaad i bartay adkeysi, geesinimo iyo waxa runta dhabta ahi tahay. Waad ku mahadsan tahay inaad i barayso inaan noqdo mid naxariis leh oo dulqaad badan iyo inaan jacayl ku hoggaamiyo. ayay qortay. 'Waan kula koray. Waxaan ku jeclaaday anigoo 13 jir ah hadda 10 sano kadib .. 23 waxaan kaa tagaa gadaal, laakiin marnaba kama tagi doono waxaad i bartay.
kuwa ugu fiican ee toogta nba waqtiga oo dhan
Ugu dambayn. Emilia Clarke ayaa dib u xasuusatay waxa ay ka dhigan tahay in la ciyaaro Khaleesi, waxayna uga mahadcelisay taageerayaasha taageeradooda.
' Ciyaarta Carshiga ayaa ii ekeysiiyay sidii qof dumar ah, jilaa ahaan iyo dadnimo ahaan. Waxaan jeclaan lahaa in aabbahay gacaliyahaygu hadda joogo halkaan si uu u arko inta ay le'eg tahay, '' ayay qortay. 'Laakiin adiga, taageerayaasha sixirka qaaliga ah ee qaaliga ah, waxaan kugu leeyahay mahadnaq aad u badan, sidaad u fiirisay waxa aan sameynay iyo waxa Ive ku sameeyay dabeecad horey ugu jirtay quluubta dad badan ka hor intaanan ku dhicin silsiladda riyooyinka. La'aantaa anaga ma jiro. Haatanna saacaddii baa dhammaatay. '
snoop dogg iyo dr dre movie
sida loo sameeyo sanduuq strawberry cake dhadhan guriga lagu sameeyo
Cuntada cake strawberry qoyan leh strawberries cusub
star wars rogue one ticket -ka hormariska ah